अधिवक्ता बन्ने रहरले बदलिएको जीवन
त्यतिखेर आइएल सकिने बित्तिकै अभिवक्ताको लाइसेन्स लिन पाइन्थ्यो । मैले नेपाल ल कलेजमा ३९/४१ को व्याचबाट आइएल सकाएको भए पनि ४५ सालमा मात्र अभिवक्ता बन्न पाएको थिएँ । नेपाल बैंकको जागीर छोडेर वकिल बन्ने...
खोक्लिङको लङ्के पिंडालु
घरमा हामी बुबा बित्नुअघि सपरिवार कहिल्यै भेला हुन सकेनौं । सन्तान जति सबै परदेशी । कहिले को हुने कहिले को नहुने । ‘म मरेको दिन मात्र सबै सँगै हुन्छौ होला ।’ यस्तै गुनासो गर्दागर्दै...
लन्डन । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपाल विश्व सभ्यताको केन्द्र र विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीको साझा फूलबारीको रुपमा रहेको बताएका छन्। बेलायतको जेठो नेपाली साहित्यिक संस्था, नेपाली साहित्य विकास परिषद्को स्थापनाको २५...
बितेको एक महिना कुबेर जर्साबको लागि सम्पूर्ण जीवनभन्दा लामो महसुस भयो। स्वर्गीय हजुरबुबा दामोदर मिश्रसंग सम्बन्धित सूचना केही समाचार माध्यमबाट प्रकासित भएपछि उहाँको परिवारलाई तनाव र नैरास्यताले सताइरहेको छ । श्री ३ चन्द्र शम्शेरको...
उनी एक नर्स तर दलित गाउँघरको असमान व्यबहार ज्याला मजदुर कि छोरी सरकारी स्कुलको पढाई गाउबाट शहरको यात्रा घर पाउन कठिन, महँगो बसाई थिएन सजिलो नर्स बन्नलाई तैपनि परिश्रम र लगन लगाई सेवामा खटाउन...
क्षितिज बनेर नहेरी देऊ
कि त मलाई त्यो मेरा सुन्दर सपनाहरूको महल बनाई देऊ, कि त मेरा सारा इच्छाहरूलाई फिर्ता गराई देऊ। मैले तिमीलाई बास दिएँ गाँस दिएँ र तिम्रो सुन्दर सपनाहरुलाई मेरो दिलमा सजाई दिएँ...
कोरोना तिमी संसारकै बाधक बन्नलाई आएको धेरै त तिम्ले लग्यौ नि अझै छौ कति मागेको ब्रह्माण्ड कतै बचेको थिएन मानव पुग्नलाई तिमी चै कता लुकेर बस्यौ ऐले नै आउनलाई दश बर्षे मेरो योजना पनि पानीमा...
‘हेलो, रितु के छ ? सन्चै छौं ?’ ‘कस्तो छ तिम्रो केयर होममा ? म त तिमीलाई सम्झेर तिम्रोमा कस्तो छ भनेर कल गरेकी नि । मेरोमा त हेरन कस्तो टेन्सन भाको छ, कोरोनाले...
एक बन्द कोठामा सोचाइ आउथ्यो अनेकथरी समय सजिलो थिएन बस्नलाई कसैगरी, हुन्थ्यो असह्य पीडा थियो मानसिक तनाव पनि विरक्त हुन्थेँ सिटामोल खान्थेँ थिएन अरु केही उपाए पनि ।। आउँथ्यो फोन शुभचिन्तकहरुको कस्तो छ त...
सासूआमाको दाहसंस्कारपछि अस्तु बाँकी राखिएको रहेछ । भाइ इन्दुले लन्डनमा घरको बगैचामा एउटा चिबा बनाउने र त्यहा“ आमाको अस्तु राख्ने र हामीले पनि ठैबको घरमा चिबा बनाउने सल्लाह गर्याै । आमाको अस्तु कुनै...
प्रवास अनि परिवार
मरिमेट्थ्यौ बाबा तिमी सन्तान पढाउन धेरै पढाइ ज्ञानी अनि सक्षम बनाउन तिम्रै सपना पछ्याउँदै ज्ञान हासिल गरे जागिर गर्छे छोरी भनी ठाडो शीर पारे तर आज तिमी पनि डग्मगायौ अरे काम छोड छोरी भनि...
भाग २ समय बित्दै गयो, उमेर बढ्दै गयो तर जवानी घट्दै गएजस्तो लाग्न थाल्यो उनलाई । विदेशको जीवन कहिलेसम्म एक्लै बस्ने हो ? अब विवाह गर्न पर्ने सोच आउन थाल्यो । सानैमा विवाह गर्ने...